संगठन को विवरण पीपीसी के हो?
पीपीसी के हो संगठन को विवरण? केही अवस्थामा यो निर्दिष्ट गर्न, र कम्पनी एक सम्झौता प्रवेश गर्ने अधिकार छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न सक्छ आवश्यक छ?
कि गरयो के हो?
लेखा र बन्दोबस्त कागजातहरू एक सेट गर्दा यो तथाकथित संगठन को विवरण "कारण कोड" (चेकपइंट नाम) निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। यो मूल्य नम्बर 9, भनेर हामीलाई पहिचान उत्पादन गर्न अनुमति प्रतिनिधित्व गर्दछ। लगभग सधैं, यो संक्षिप्त (पछि यो थप) को INN संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ। कारण कोड तीन ब्लक हुन्छन्। संघीय को जानकारी विभाग - पहिलो देखि चौथो अंक को कर सेवा रूस। पाँचौ देखि छैटौं गर्न - वास्तविक चेकपइंट। सिरियल नम्बर, दर्ता लागि एउटा कारण तोकिएको छ जो - सातौं देखि नवौं अङ्क।
यो एक चेकसम मार्फत प्रमाणित गर्न सक्दैन किनभने हुन केही विशेषज्ञहरु, पीपीसी आलोचना गरेका छन्। कोड लगभग सधैं INN संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ किन छ। नियम, यो संगठन बारेमा धेरै जानकारी छैन।
जब तोकिएको कोड
विवरण मा यस्तो चेकपइंट, को उद्यमी लगभग व्यवसाय दर्ता चरण सिक्छन् भन्ने तथ्यलाई। रेकर्डमा rises यदि कारण कोड सेटिङ संगठन, प्राप्त छ, र धेरै कारण। पहिले, यो भर्खरै दर्ता वा पुनर्गठित, कानुनी निकाय को स्थान छ। संगै कोड कम्पनी पनि प्राप्त र INN। दोस्रो, जिम्मेवारी ठाउँ कम्पनी यसको स्थान परिवर्तन भने, त्यसैले कर अख्तियार परिवर्तन भएको छ लिन्छ र।
यो नयाँ स्थान संघीय कर सेवा पूर्व विभाग प्रदान गर्दछ जो रजिस्टर देखि जानकारीमा आधारित निर्धारण गरिन्छ। तेस्रो, कोड फर्म को कुनै पनि भागहरु को स्थान मा तोकिएको हुन सक्छ। तर यो मामला मा त्यो एक बयान लेख्न छ। चौथो, कोड जिम्मेवारी लागि आधार कार्यालय वा संगठनको व्यक्तिगत सम्पत्ति को स्थान हुन सक्छ। कर नियन्त्रण को अभ्यास छ मा, को पाठ्यक्रम, अन्य आधार को एक किसिम को लागि दर्ता जिम्मेवारी कथन कोड को अवस्थामा, तर चार सूचीबद्ध - सबै भन्दा साधारण।
गियर छाप बिना
विवरणहरू पीपीसी के हो? यो सबै माथि, सम्झौताहरू खाली को निष्कर्षमा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा। यस संगठनका विवरण सामान्यतया सामान्य र बैंकिंग विभाजित। CPR को रूसी व्यवहार मा एक पहिलो छ। के चिन्ता? व्यापार को कानुनी फारम एक ब्रान्ड नाम, टाउको संरचना (कुनै छ भने): विशेषज्ञहरूले कुनै पनि फर्म पहिचान गर्न जानकारी हुन सक्छ भनेर याद गर्नुहोस्। यस संगठन को सामान्य विवरण सामान्यतया व्यापार मालिकहरूको वैधता पुष्टि गर्न सके जो दर्ता (प्रमाणपत्रहरू, लाइसेन्स), मा डेटा समावेश।
संकेत, नियम, दर्ता मिति, कागजात संख्या, बिन कानुनी निकाय र, रूपमा लागू भने, कागज जारी जो एक सार्वजनिक अख्तियार, को नाम। वास्तवमा, लगभग सधैं रूस संघीय कर सेवा एक क्षेत्रीय विभाजन बस यसको निर्देशांक निर्दिष्ट छ। कम्पनी को सामान्य विवरण ठेगाना समावेश - नियम, त्यहाँ कानुनी र वास्तविक हो, फोन नम्बर, सम्पर्क ई-मेल र वेब-साइट। दिशा बारे जानकारी निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ।
एक पीपीसी को आवश्यक तत्व
यो विवरण के मतलब पीपीसी कम्पनीहरु गर्छ? कोड कानुनी निकाय गैर-नगद भुक्तानी बाहिर छ जसको लागि सबै कागजात मा संकेत छ भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूले सामान्य विवरण बाहेक, आवश्यक र पनि बैंक। तिनीहरूलाई धेरै। ठेके र विभिन्न कागजात मा विवरण को पहिलो कम्पनी नाम संकेत गर्छ। अर्को - बैंक मा हालको खाता नम्बर (नियम, उहाँले dvadtsatiznachny), को नाम क्रेडिट र वित्तीय संस्थाले BIC (नौ अंक), को संवाददाता खाता (यो केन्द्रीय बैंक नियुक्त गरिएको छ)।
साथै, (यो के ठीक कम्पनी मा लगी भएको छ निर्धारण गर्न सम्भव छ मा) CPR रूपमा संगठनको विवरण संकेत हुनुपर्छ Inn, OKPO। यो सबै जानकारी सामान्यतया मुद्रण कम्पनी मा संकेत गरिएको छ। यो पीपीसी जारी छैन भनेर टिप्पण लायक छ व्यक्तिगत उद्यमीहरू, गर्न पनि छापिएको छैन हुन सक्छ जो। सपा आफ्नो VAT नम्बर मात्र संकेत गर्न सक्छन्, तर यो पूर्ण-fledged गैर-नगद भुक्तानी लागि सामान्यतया पर्याप्त छ।
पीपीसी र निविदाहरु
त्यहाँ अवस्थामा CPR तथापि, अनिवार्य, र यो बिना कम्पनी सक्षम हुने छैन जहाँ (वा त्यो कठिनाइ हुन सक्छ) हुनेछ अनुबंध केहि प्रकारको प्रवेश छन्। सामान्य यहाँ नियम, तर त्यहाँ precedents छन्। आवेदकहरुलाई लागि जरूरी - उदाहरणका लागि, चेकपइंट निर्दिष्ट नगरपालिका र राज्य निविदाहरु केहि प्रकारको लागू गर्दा।
यदि यो साजसज्जा छैन, यो कि आवेदन "फिल्टर" पहिलो चरणको मा (केही अवस्थामा स्वतः) सम्भावना छ। यो एक "विवेक" आईपी जडित चेक बिन्दु छैन भन्ने छ - जानिन्छ, तर तथ्य हो छैन। केही अवस्थामा, खैर, राज्य अनुबंध लागि कम्पनी-आवेदक टाउको थियो आवश्यकता छ। र नियम, उद्यमीहरू रूपमा कार्य गर्ने संगठन, त्यहाँ यस्तो कुनै पोस्ट छ। बैंक विवरण एक चेकपइंट को उपस्थिति, ताकि निविदाहरु मा कम्पनी को प्रतिस्पर्धा असर गर्न सक्छ।
पीपीसी INN संग संयुक्त
भ्याट बिना विवरण पीपीसी के हो? अभ्यास यो घटना अत्यन्तै दुर्लभ छ भनेर देखाउँछ। माथि उल्लेख रूपमा, जब कानुनी संस्थाहरू बीच फरक अनुबंध को पीपीसी दर्ता लगभग सधैं कपन संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ। के दोस्रो संक्षिप्तरूपहरूप्रयोगगर्नुहोस् को लक्षण हो हेरौं। कपन (करदाता पहिचान नम्बर) - 10 अंक को कोड हो। यसको संरचना कसरी गियरबक्सलाई समान पनि धेरै ब्लक प्रतिनिधित्व। पहिलो दुई अंक - रूसी संघ को विषय को कोड छ। तेस्रो र चौथो - विभाजन रूसी संघीय कर सेवा संख्या। अर्को पाँच अंक - USRRE मा निहित छ, जो कानुनी निकायहरूको को कर रेकर्ड अद्वितीय संख्या। पछिल्लो अंकको - नियन्त्रण। चाखलाग्दो vzaimopolozhenie कैट र INN बैंकहरू। भने, उदाहरणका लागि, क्रेडिट र वित्तीय संस्थाले धेरै शाखा छ, को HPI ती सबै लागि एक (टाउको कार्यालय) छ। को एकाइहरूको प्रत्येक रूपमा पीपीसी यसको आफ्नै हुनेछ। तसर्थ, बैंकहरू विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय लगभग कहिल्यै जो कुनै पनि संगठन को विवरण मा पीपीसी अर्थ दुई संक्षिप्तरूपहरूप्रयोगगर्नुहोस् को नै संयोजन, को विवरण - सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।
को पूँजीकरण के हो
डेबिट कार्ड "Tinkoff": समीक्षा, अवस्था, दर्ता, नगद withdrawals
वित्तीय oligarchy - यो के हो? वित्तीय oligarchy को हैकम विधिहरू
व्यावसायिक बैंकहरू को सबै भन्दा साधारण नगद लेनदेन
Scammers को एटीएम कार्डबाट डाटा चोरी गर्न नयाँ तरिका फेला
अनुहार मा खैरो स्पट: कारणहरू, तिनीहरूलाई सामना गर्न तरिकामा
मोटर वाहन डिस्क को Brazier: विनिर्माण
समाज को आधारभूत संस्थाहरु। तिनीहरूले के के हुन्?
प्रतीकात्मक रूप - यो ... अवधारणालाई उदाहरण